I-TikTok yeShishini: Fikelela kubaThengi abaFanelekileyo kule Nethiwekhi yeFom yeVidiyo eNcinci | Martech Zone
I-TikTok yeShishini: Fikelela kubaThengi abaFanelekileyo kule Nethiwekhi yeFom yeVidiyo emfutshane
NgoLwesithathu, Matshi 24, 2021 NgoLwesithathu, Matshi 24, 2021 Douglas Karr
TikTok yeyona ndawo iphambili yevidiyo yefom yefom emfutshane, ebonelela ngesiqulatho esivuyisayo, esizenzekelayo, nesinyanisekileyo. Akukho mathandabuzo malunga nokukhula kwayo:
I-TikTok inezigidi ezingama-689 zabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga ngenyanga.
Uhlelo lokusebenza lweTikTok lukhutshelwe ngaphezulu kwamaxesha ezigidi ezi-2 kwiVenkile yeVenkile nakwiGoogle Play.
I-TikTok ibekwe njengeyona app iphambili ikhutshiweyo kwiVenkile yeApple ye-Apple ye-Q1 2019, nangaphezulu kokukhutshelwa okungama-33 ezigidi.
Iipesenti ezingama-62 zabasebenzisi beTikTok e-US ziphakathi kweminyaka eli-10 ukuya kwengama-29 ubudala.
I-TikTok ikhutshelwe amaxesha angama-611 ezigidi eIndiya, ejikeleze iipesenti ezingama-30 zokukhuphela usetyenziso lwehlabathi.
Xa kuziwa kwixesha lemihla ngemihla elichithwe kwiTikTok, abasebenzisi bachitha umyinge wemizuzu engama-52 ngosuku kwi-app.
I-TikTok iyafumaneka kumazwe ayi-155, kwaye ngeelwimi ezingama-75.
Iipesenti ezingama-90 zabo bonke abasebenzisi beTikTok bangena kwi-app yonke imihla.
Kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezili-18, inani labasebenzisi abadala be-TikTok base-US lakhula amaxesha angama-5.5.
Kwakukho inani elingaphezulu kwesigidi esinye sevidiyo ezibukwayo yonke imihla ngonyaka.
Umthombo: Oberlo - I-10 TikTok Statistics Ekufuneka Uzazi ngo-2021
Njengolunye losetyenziso oludumileyo emhlabeni, iTikTok ibonelela iinkampani ithuba lokufikelela kuluntu olukhulu lwabasebenzisi ababeka phambili ukuzonwabisa kunye nokunyaniseka.
I-TikTok yeShishini yenye yeenethiwekhi kuphela ezinamava okukhula okubonakalayo kwi-iOS (+ 52% yesabelo sentengiso). Inethwekhi yentlalo yenyuka indawo eyi-1 kwi-iOS ukuya kwi # 7 kunye ne-1 indawo kwi-Android landing kwi # 8. Kwinqanaba leqonga lomnqamlezo, lafikelela kwinqanaba eliphezulu lamandla e-5 kwezolonwabo, ezentlalo, indlela yokuphila, impilo kunye nokuqina, ezezimali, ukufota, kunye neqela elisebenzayo.
Inkqubo yokuSebenza kweFlyer
TikTok Umphathi weeNtengiso
Ngomphathi weeNtengiso zeTikTok, iinkampani kunye nabathengisi banakho ukufikelela kwiibhidi kunye nokubeka iiNtengiso ze-In-App (IAAA) okanye baqalise ukufakwa kwesoftware yabo kubaphulaphuli beTikTok kunye nosapho lweeapps. Ukusuka ekujoliseni, ukwenziwa kweentengiso, iingxelo zokuqonda kunye nezixhobo zolawulo lwentengiso TikTok Umphathi weeNtengiso ikunikezela ngeqonga elinamandla, kodwa elilula ukusebenzisa eliza kukunceda ufikelele kubaphulaphuli abazithandayo iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Ukubekwa kweNtengiso yeTikTok kunye neefomathi
Iintengiso zakho zingavela kwenye yezi ndawo zilandelayo ngokusekelwe kwi-app:
Ukubekwa kweTikTok: Iintengiso ziya kuvela njengentengiso yokondla
Ukubekwa kweeapps ezintshaIintengiso ziya kuvela kwezi ndawo zilandelayo:
BuzzVideo: kwi-feed, iphepha leenkcukacha, emva kwevidiyo
TopBuzz: kwi-feed, iphepha leenkcukacha, emva kwevidiyo
Iindaba zeRepublic: ekutyeni
Babe: kwi-feed, iphepha leenkcukacha
Ukubekwa kwePangle: Iintengiso ziya kuvela kwifayile ye- Njengeentengiso ezinokudlalwa, Iintengiso zevidiyo, okanye iintengiso zevidiyo.
Umphathi weeNtengiso zeTikTok uxhasa zombini umfanekiso ad kunye ividiyo yentengiso iifomathi:
Iintengiso zemifanekiso -Ingabekwa kwindawo yasekuhlaleni kwaye zombini i-PNG okanye iJPG zamkelwe ngesisombululo esicetyiswayo sobuncinci be-1200px ubude nge-628px ububanzi (iintengiso ezithe tyaba zinokuhlalwa nazo).
Iintengiso zeVidiyo -Kuxhomekeke kwindawo ongathanda ukuyibeka kuyo, umlinganiso we-9: 16, 1: 1, okanye 16: 9 unokusetyenziswa ngeevidiyo imizuzwana emi-5 ukuya kwimizuzwana engama-60 ubude kwi .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , okanye ifomathi ye .avi.
Ukubonelela ngeTikTok Itemplate yeVidiyo, Isixhobo esenza ukudala iintengiso zevidiyo ngokukhawuleza kwaye kube lula. Unokwenza intengiso yevidiyo ngokukhetha itemplate kunye nokulayisha iifoto zakho, isicatshulwa kunye neelogo.
TikTok: UkuKhangela iiMicimbi zeWebhusayithi
Ukuguqula abasebenzisi beTikTok basebenzise iwebhusayithi abanokundwendwela okanye bathenge iimveliso okanye iinkonzo kwindawo yakho kulula nge-pixel yokulandela umkhondo weTikTok.
TikTok: UkuKhangela kwiMicimbi ye-App
Xa umsebenzisi ecofa / ejonga intengiso kwaye esenza ezinye izinto ezinje ngokukhuphela, ukwenza kusebenze, okanye ukwenza ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo ngaphakathi kwefestile yokuguqula, iRekhodi yokuLinganisa abaSebenzi (MMP) kwaye ithumele le datha kwiTikTok njengotshintsho. Idatha yokuguqula, kusetyenziswa uphawu lokucofa okokugqibela, emva koko iboniswe kuMphathi weNtengiso zeTikTok kwaye sisiseko sokwandiswa kwexesha elizayo kwiphulo.
I-TikTok yokuSebenzisa iMicimbi yeShishini: Isilayidi kunye nokuxelela
Njengevenkile ezimeleyo yobucwebe, uSlate & Xelela babejonge ukwakha ulwazi kunye nokuqwalaselwa ngexesha lokuthengisa eliphakamileyo. Ngokusebenzisa i-TikTok yesixhobo esisebenziseka ngokulula seSmart seVidiyo yokuSebenzisa kunye nokwenza iphulo kwiminyhadala, bayile ukuzonwabisa kunye nokudala izinto ezifikelela kubasebenzisi be-4M TikTok kwaye zakhokelela kwiseshoni enye ye-1,000 ngeza kwitshathi uguquko, lubanceda bafeze iinjongo zabo zokubuyela kwintengiso kwi-2X kwiinyanga nje ezi-6.
Qala kwiTikTok namhlanje!
tags: b2cb2c intengisointengiso yabathengiiaaIntengiso yangaphakathi nohleloufakelo lwangaphakathi nohlelointengiso yeselulaTikTokukubekwa kwentengiso yetiktoktiktok umphathitiktok yeshishiniizibalo zetiktokimicimbi yewebhusayithi ye-tiktokzevidiyointengiso yevidiyo
UpLead: Yakha uluhlu oluchanekileyo lwe-B2B kuLuhlu lweMikhankaso yamandla kunye nokuVala ukuThengisa